Ukuboniswa ngokuLula okuNinzi-imiqondiso yedijithali kunye neVidiyo yeDonga yeSoftware
Iimpawu zedijithali kunye nevidiyo yeWall Software
Esona sisombululo sifikelelekayo kwintengiso!
IZiko loMyalelo kunye noMcimi-mlilo
Ifashoni kunye noRhwebo
Iindawo zokutyela kunye neeCafes
Izikolo kunye neMfundo
Igumbi lokufundela elibonakalayo
Isoftware yedijithali yemiqondiso yamashishini
Nokuba uyishishini elincinci okanye ishishini elikhulu, ukuBoniswa ngokuLula kwesoftware kuyimpawu yesoftware eyenza kube lula ukubonisa imultimedia yakho kwimiboniso emininzi.
Ngephepha-mvume eli-1, unokubonisa imithombo engama-24 yemithombo yeendaba ngexesha elinye, kwimiboniso eyahlukeneyo emi-6. Thetha nathi malunga nezisombululo zethu zeshishini ukhetho olungenamda.
Fumana ukufikelela kwangoko
Umboniso oLula we-Multi is the Eyona software ilungileyo yedijithali kuwo nawuphi na umbutho ofuna ukubonisa ulwazi lwedijithali kubathengi nakwiindwendwe zabo.
Ikhefi kunye neeeresityu
Ifashoni kunye neeVenkile zoRhwebo
IZiko loLawulo kunye nabaCimi-mlilo
Amayeza kunye neMpilo
Veza kwisikrini esinye ukuya kwi-1 imimandla yeendaba ekhethekileyo
Jonga kwizikrini ezi-6 ukuya kuthi ga kuma-24 imimandla yemithombo yeendaba ekhethekileyo
Ukufikelela kwenethiwekhi yasekhaya (kufuna iilayisensi ezi-2: Umncedisi wePC kunye noMdlali wePC)
Ukufakwa kwendawo kunye nenkxaso
ukusuka € 899 ngaphandle kweVAT *
Umthengi wethu uthanda nje indlela elula yokubonisa imidiya yabo ngokuBonisa ngokuBanzi. Isinxibelelanisi sesoftware sikukhokelela kwinkqubo yoqwalaselo lwenqanaba ngenyathelo, kukubuza yonke imibuzo elungileyo apha endleleni.
Awudingi ukuba ube yiteknoloji enkulu ukuze uvuke kwaye usebenze ngokuBonisa ngokuLula. Kungenxa yoko le nto isoftware yethu iyi le Eyona software ilungileyo yedijithali
-IWizadi yoLwazi lweMulti emininzi ilula ekhokela kwinkqubo yokuseta.
- Gcina ugcino olubonakalayo oluninzi kwaye ulilayishe ngokulula.
-Ukukhethwa kolwimi: IsiNgesi, isiFrentshi, iSpanish, isiTshayina, isiDatshi kuyaqhubeka
Ngaba ufuna uncedo olongezelelweyo? Sinikezela ngoqeqesho kwi-intanethi okanye kwi-site kunye nenkxaso yesoftware, nceda unxibelelane nathi!
DLULA UKUFUNDA NGEXESHA ELULA KOKUFUNDISA KAKHULU
Umzekelo wekhemesti kunye nezikrini ezi-4
JONGA ZONKE IIVIDIYO ZETHU
Ngaba ufuna izibonelelo ezikhethekileyo kunye nezaphulelo?
Isikhokelo soMsebenzisi oLula seMulti seMiboniso V2
Ndilubonisa njani unyuselo?
Silusebenzisa njani ulawulo lwethu olukude?
Ungawubonisa njani umyalezo obhaliweyo?
Usebenzisa njani izikrini ezi-2 kwi-WIN10?
Ungazibonisa njani iividiyo ezininzi enye emva kwenye?
Ungawubonisa njani umfanekiso ofanayo kwiivenkile ezininzi?
Uyibonisa njani iifayile zakho zePowerpoint?
Ngaba ukuBonisa ngokuLula okuninzi kunokukunceda njani ukuphucula ukubonwa kwedatha yakho?
Kutheni ukhetha inkqubo yangaphandle yemiqondiso yedijithali?
Yeyiphi imiqondiso yedijithali yezixhobo ekufuneka ndiyisebenzisile?
Izibonelelo ezi-7 zoBoniso lweDijithali
Uyisebenzisa njani imiqondiso yedijithali kwindawo ekuthengiswa kuyo iziyobisi?
| Ilungelo lokushicilela © Ukuboniswa ngokuLula ngokuNinzi kwe-2021 imiqondiso yedijithali kunye neVidiyo yeWall Software yamashishini |
Molo, igama lam ndinguGuy Condamine, umseki we-EMD, masithethe kunye.